သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနှင့် အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 1, 2012 in Creative Writing, Short Story | 40 comments
ဦးဇင်းဘိုခိုင် ဟာ ဆရာတော် မရှိတာနဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းတွင်း ဝင်ရောက် ကျိန်းစက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညက ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားတွေ အိပ်တာ များတဲ့အတွက် ဦးဇင်းဘိုခိုင်က သူ့နေရာကို အခြား ဦးဇင်းတစ်ပါးကို ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် ဆရာတော် အခန်းတွင်း ဝင်ရောက် ကျိန်းစက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဘိုခိုင် ကျိန်းစက်နေတဲ့ အခါမှာ လည်ပင်းကို ညစ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတာနဲ့ မျက်လုံးကိုလည်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရော မည်းမည်း အကောင်ကြီး တစ်ကောင်က သူ့လည်ပင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။
အဲဒီညအဖို့ ဦးဇင်းဘိုခိုင် ဆရာတော်ရဲ့ အခန်းတွင်း ဝင်ပြီး ကျိန်းစက်ခဲ့ပေမယ့် အကောင်ကြီး ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ သိမ်ဝင် သပိတ်ကွဲနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့၊ အသက်ဝင်ခဲ့တဲ့ ဘီလူးအင်း ဟာ ဦးဇင်းဘိုခိုင်ရဲ့ လက်စွမ်းကြောင့် မြေအောက် ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း ခရီးက ပြန်ရောက်ရော ဦးဇင်းဘိုခိုင်က ဘီလူးအင်း ကို ဖျက်ဆီး ပစ်လိုက်ကြောင်း လျောက်ထားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဆရာတော်က အင်း … ကိုယ်တော်က တပည့်တော် အခန်းထဲ ဝင်ကျိန်း ခဲ့တာကိုး။ အဲဒီ ဘီလူးက တပည့်တော် မဟုတ်တော့ ကိုယ်တော့်ကို ရန်မူတော့တာပေါ့။ ကိုယ်တော် မကြောက်တတ်လို့ တော်ရော့တယ်။ နို့မဟုတ် ကိုယ်တော် သေနိုင်လောက်တယ်။ အေးကွယ် .. ကိုယ်တော်လို လူမျိုးကို သွားပြီး ရန်စတာဆိုတော့ အင်း … ဘယ်လို ပြောရလဲ။ ကောင်းပါတယ်ပေါ့ … ဟူ၍ ဆရာတော်က ဦးဇင်းဘိုခိုင်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာတော်ဟာ ခရီးထွက်တိုင်း အခန်းတံခါးကို သော့ခတ်ထားခဲ့ပြီး သော့ကိုပါ တစ်ပါတည်း ယူသွားတဲ့အပြင်၊ ဘယ်သူမှ သူ့အခန်းတွင်း မဝင်ရန် အမိန့်တော် ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါမျိုးပြောတာပေါ့ လူမိုက်ရင် သရဲတောင်ပြေးရတယ်
ကိုပေမိုက်ရင် မာဆွတ်က တောင်မလေးတွေပြေးရတယ်
ကိုပေါက်ဖော် မိုက်ရင် ကြောတော့ဘူး
ဖျဲသီး မိုက်ရင် မယ်ချောက်ဖုတ်တောင် ပြေးရတယ်ဟေ့..
အံဇာတုံးမိုက်ရင် ဖွားသီလရှင်တောင် ပြေးရတယ်ဟေ့..
ဖွားသီလရှင် ပြေးအောင်တော့ မမိုက်ပါရစေနဲ့ ကိုပေါက်ဖော်ရယ် …
တော်ကြာ အနော် ငရဲကြီးနေပါဦးမယ် ..
ကပေါက်ဖော်၏ အဆို သုံးခုတွင်
၂ ခုအား မသိသော်လည်း
အဆို ၁ ခုအား ကန့်ကွက်၍ ပြင်ဆင်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်
စိန်ပေါက်ပေါက်မိုက်ရင် သဂျီးတူမတောင်ပြေးရတယ်ဟေ့.. …. အစား ….
စိန်ပေါက်ပေါက်မိုက်ရင် ဖြိုးတို့အုပ်စု ပြေးရတယ်ဟေ့ ဟု ပြင်ဆင်ပေးပါရန် အဆိုပြုပါသည်
လိင်တူချစ်သူများမဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော်အမတ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကိုယ်စား …
အနန္တ စကြဝဠာ မဟာရာဇာ အံစာတုံး …. ဟောဟဲ ဟောဟဲ
အားပေးနေဒယ်ဗျို့ … ဒီတစ်ခွန်းပြောဖို့ နာမည်ခေါ်ရတာ မောလိုက်တာဗျာ ….
ဖားကတ္တင်း မိုက်ရင်ကော ဘူထွက်ပြေးသလဲချင့်..?
ဖားကတ္တင်း မိုက်ရင်တော့ တဂျီး ထွက်ပြေးပါတယ်တဲ့ ချင့် အဲ ဂျ ….
ဘယ့်နှယ့် သဂျီးက ပါလာရတာတုန်း ….
အင်း ..သမီးတောင်းတဲ့လူနဲ့ တူမ ချမ်းသာမပေးတဲ့လူနဲ့…
သဂျီးတော့ ကုန်ဘာဘီ ကုန်ဘာဘီ ဒို့အမျိုးဒွေတော့ ကုန်ဘာဘီ ….ကိန်းပဲ..
သဂျီးခယ်မ မွမွ ပေးမှ လူပြန်ဖြစ်မယ့် ဖားမင်းသားလေး ဂီ…
မြန်မာ အင်းတွေထက် ထိုင်း စမ အင်းကွက်တွေက ပိုလှတယ် ထင်တယ် သူကြီးရဲ့ … ။
ဒါနဲ့ အင်းကွက် တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လို ခေါ်သတုန်းဗျ။ Google မှာ အင်းကွက် ပုံတွေလိုချင်လို့ လိုက်ရှာတာ မြန်မာလို ရိုက်ရှာရတော့ သိပ်ပြီး အားမရဘူးဗျာ။ အဲဒါလေး တစ်ဆိတ်လောက် ပြောပြပေးပါဦးနော် .. ။ Please …
ဘီလူး အင်း သာမက ညွှန်းဆိုတဲ့ ယပက်လက် အင်းတွေပါ အားပေးသွားပါကြောင်း
ဘိုလို ဆို၇င်တော့ ..ouija အွီးဂျား အင်းချပ်လို့ အကြမ်းဖျင်းခေါ်သလားလို့ ….
symbols of witchcraft ဆိုရင်တော့ ဟယ်လိပ္ပေါတာ နဲ့ နီးစပ်သွားမလားပဲ….
သည်အတွေးလေး ဖြစ်မိကြောင်းကိုတော့ သဂျီး အရင်ဦးအောင် မန့်ဦးမှ….
ပြောရရင်တော့ ရောမ က ခေါမ ကို တကယ်ပဲ စစ်နိုင်ခဲ့သလား…
ဗမာက ယိုးဒယားကို တကယ်ပဲ စစ်နိုင်ခဲ့သလား…
ကျေးကျေးပါ ဂီဂီ ရေ ……
အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်လေးကိုဖတ်၇သလိုဘဲ။ ဒါမျိုးတွေခုခေတ်မှာရှိသေးလား။ ရှိသေးရင်အင်းရေးခိုင်းချင်လို့။ ဟင်းဟင်း….
ကိုပေ တို့ကတော့ တွယ်တာတောင် ရိုးရိုးတွယ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အားရပါရ တွယ်ပစ်မယ် ဆိုပါလား … ။
အဲဒါကြောင့် ဖရဲက ပြောတာထင်တယ်။
“ကိုပေမိုက်ရင် မာဆွတ်က တောင်မလေးတွေပြေးရတယ်” လို့ ….
အခုလို ကိုပေတို့၊ ကိုဘလက်တို့၊ ဖရဲ တို့ စတဲ့ စတဲ့ လူတွေနဲ့ ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့တာဟာ ကိုပေါက်ဖော် ကြောင့်လို့ ပြောရမယ်ဗျို့ …
ကိုပေါက်ဖော်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အကြောင်းကို ကိုလည်း ပို့စ်တစ်ခုအနေနဲ့ တင်သွားဖို့ ရေးထားတယ်ဗျ။
အဲဒါ တင်ရင် ကောင်းမလား ….. သိဘူး
အဲလိုလိုက်လိုက်စတတ်လို့ .တစ်ခုခုပြောပြီး အေးဆေးနှပ်နေလို့ မရဘူး
ကိုယ့်ကို ဘသူက အနောက်က လိုက်ဖဲ့မလဲ ကျောမလုံဘူး
မန်းလေးသား ဖျဲသီးနဲ့အီးပေ အဆိုးဆုံး
အနောက်ကနေ တန်းဆီပြီး သများကို လိုက်လိုက်ဖဲ့နေတာ..
ဟုတ်တယ် ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံး
ကိုပေါက်ဖော်က တကယ်ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အစ်ကိုဗျ
ပို့စ်တွေဖတ်ရတာ ကိုပေါက်ဖော်၊ကိုပေ စသည့်တို့မရှိရင်ပျင်းခြောက်ခြောက်ကြီးဗျ
တခါက.. ကားမှန်မှာအလှကပ်မလို့..Adobe Illustrator နဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်တာ.. စာလုံးက.. ဘာအက္ခရာမှန်းမသိဘူး..။
မြန်မာပြည်မှာ အရင်ကကျော်ကြားခဲ့ ဘားမဲ့ဆရာတော် အင်းစာအုပ် ၃ အုပ်ရှိတယ်
စာအုပ်ကိုလိုချင်တာပေါ့..။ ကျုပ်က.. မြန်မာ့ရိုးရာဒီဇိုင်းတွေ စုတာဝါသနာပါလို့လေ…။
ဒီခေတ်မှာ သပိတ်အကွဲရဘို့ကတော့ တယ်မလွယ်ဘူး
ဒီခေတ် သပိတ်တွေက တူနဲ့ထုရင်တောင် ပိန်သွားတာဘဲရှိမယ်
လူတွေ ဘာကိုဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့လုပ်ကြသလဲမသိတဲ့ မြသပိတ်ဆိုတာကြီးကလည်း
ဘယ်သူမှ သိမ်မတက်တဲ့အတွက် သပိတ်ကွဲရရန်လမ်းမမြင်
ကျုပ်ကတော့ ဂါထာမန်တန်တွေမှာ အိပ်စပတ်
ကော်သပိတ်တွေ ဖိုင်ဘာ သပိတ်တွေ ရှိတယ်လေ..
ကိုရင်တွေ အသုံးကြမ်းလို့ ခဏခဏ လွတ်ကျရင် ကွဲတာပဲ..
ယ ပလက်မှာသာ စတီးသပိတ်သုံးကြတာ ဒီမှာ အဲလောက် မသုံးနိုင်ကြသေးဘူး။
ဆရာတော်ကြီး သက်တော်ထင်ရှား ရှိပါသေးတယ်ဗျာ။
ဘွဲ့အမည်က – ဦးဓမ္မိက လို့ ခေါ်ပါတယ်။
စော်ကားတာတော့ မဟုတ်ပေမယ့် … ဘီလူးက ဘယ်နှယ့် လက်တွေအများကြီးဖြစ်နေရသလဲနော် .. သူများ ဘာသာကနေဆင်းသက်လာတဲ့ပုံကို အတုခိုးထားသယောင်ယောင် … ။
အမှန်တိုင်းပြောရလျှင် လောကီပညာရပ်တွေ ရှိပေမယ့် … ကိုယ့်အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင် မျက်စိရှေ့မှာတင် ဖြစ်ပျက်ကြတာမဟုတ်တော့လေ … သိလိုစိတ်တော့ပြင်းပျပေမယ့် မစူးစမ်းရဲပါဘူး .. မတော်လည်ပင်းလာညှစ်လို့ …
etone ရေ ..
ပုံထဲက ဘီလူးက ထိုင်း ဘက်ကပါ။ ဘီလူးဆိုတာထက် ရာမ ဇာတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ မျောက်မင်း ပုံဆိုရင် ပိုမှန်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီပုံလေးနဲ့ ကောင်းမယ်ထင်တာနဲ့ အခြား ဆိုက်ကယူပြီး ထည့်လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် သူကြီးကို ညွှန်းထားတဲ့ လင့်ကို သွားကြည့်ရင် အဲဒီလို ပုံတွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ် etone ရေ …
တခုမေးမယ်နော်။ ထန်းလျှက်ခိုးစားတုန်းက ဘီလူးနဲ့တွေ့တယ်။ အင်း သွားရှာတော့ ဘီလူးနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ နေ့နဲ့ည ကွာလို့လား ။ ဘာကွာသလဲသိချင်ပါတယ်။ သူကြီး အင်း စာအုပ်တွေလိုချင်လား။ တကယ်ပို့ပေးရမလား။
nature ရေ …
” အဲဒီ ဘီလူးအင်းဟာ ညဘက် ရောက်တာနဲ့ အသက်ဝင်တော့တာပါပဲ။ ” …
ဒီစာကြောင်းလေးကို သတိမထားမိဘူး ထင်ပါတယ်။
သဂျီးကို အာဠာဝက ဘီလူးအင်းရှိရင် ပေးလိုက်ကြပါဗျာ။ သူ့ကို ဘီလူးစီးတာ မြင်ချင်လို့…။ မစီးလည်းစီးတယ်ဆိုပြီး ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ ဝင်ရိုက်မယ်…။
အဲဒီ ဘီလူးရုပ်က ယပလက် ဘီလူးကြီး။
မြန်မာ ဘီလူးက မျက်လုံးပြူးပြတဲ့ အနေအထားနဲ့ ခေါင်း က အဲလို ဂတုံးကေ မဟုတ်ဘူး။
ပြောသာ ပြောရတာ.. တကယ်တမ်း အစွမ်းအစ ရှိလို့ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် အင်းကို ရေးနိုင်ထွင်နိုင်တဲ့ သူ မဖြစ်ချင်ဘူး ဖျက်နိုင်တဲ့ သူ ဖြစ်ချင်တယ်။
ယိုးဒယားမှာ လူတိုင်း အင်းနဲ့ မကင်းကြဘူး.. လူတွေ ဆွဲ ထားကြတဲ့ တို့လို တွဲလောင်းတွေက အကုန် အင်းတွေချည်းပဲ.. တက္ကစီမှာခေါင်မိုးတွေမှာ အင်းတွေ ရေးထားကြတယ်။
အဲဒီ အစွမ်းတွေ ဖျက်ကြည့်ချင်တယ်။ တော်ကြာ အင်းက အကောင်က နေစရာ မရှိဖြစ်သွားမှာ စိုးလို့.. ဟိဟိ.. စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာ ပြောပါတယ်။
ဇတ်လမ်းထဲက ဦးဇင်းဘိုခိုင် က ဆုံ ထဲ ထည့်ထောင်းလိုက်တာ ဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် အင်းဆွဲတဲ့ လူကို ပြန်ခိုက်တတ်တယ်။ အဲဒီ ဘီလူး နေစရာ မရှိလို့သော်လည်းကောင်း သူခံလိုက်ရတဲ့ အတွက်သော်လည်းကောင်း ဘာလို့လဲတော့ မသိဘူး.. အင်းပျက်ရင် အင်းဆွဲတဲ့ လူ ပြန်ထိတယ်။
သမာဓိ အား အရမ်းကောင်းလွန်းနေလို့ ဘာမှ မဖြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို နောက်တခု ထပ်ဆွဲပြီးတော့ ဖြေသိမ့်ပေးလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ယေဘူယျ ကြားဖူးတာ မှန်းကြည့်တာပါ။
ဒီအရုပ်တွေရေးရုံနဲ့ ဒီလို ထူးခြားတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လက်ခံစိတ်နဲ့များဆိုင်နေမလားပဲ ။
အရုပ်တွေက စွမ်းတာလား ၊ ရေးတဲ့ လူက စွမ်းတာလား ၊ စီရင်တဲ့ နေရာက စွမ်းတာလား ၊ ဘာလား ၊ ညာလား နဲ့ သိချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားဖြစ်မိပါတော့တယ် ။ :question:
AKKO ရေ ..
အင်း ဆိုတာ နက္ခတ်နဲ့ ကြုံတဲ့အခါ အစွမ်းထက်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အသက်သွင်းတဲ့ အင်းတွေဆိုရင် နက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးရတာဆိုပဲ ….
ကိုအံစာတုံးရေ အင်းကွက်တွေအကြောင်း သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဒီမှာတော့ စန်းကောင်းတဲ့အင်းရှိတယ်။ အခုခေတ်အခေါ်နဲ့ဆိုရင် ဆော်ကြည်အင်းပေါ့
အဲဒီအင်းထလာပြီဆိုရင်မလွယ်ဘူး အနားမှာ ပုလင်းလွတ် ဗူးလွတ်တောင်ထားလို့မရဘူးတဲ့
ဘာလို့လဲတော့မသိပါဘူး ….. ။
မဟုတ်မှ လွဲရော။ ကိုဖက်တီးရဲ့အင်းက ခြင်္သေ့အင်းများလား။ ဒီအင်းက တရွက်ထဲဆိုမစွမ်းဘူး။ အထပ်လိုက်ကိုင်ရင် တော်တော်လေးအစွမ်းထက်တယ်ပြောတယ်။